Ụbọchị My Pet » 5 Actionable Atụmatụ na-adọta nwaanyị gị Nrọ
site Bill Achola
5 Actionable Atụmatụ na-adọta nwaanyị gị Nrọ
emelitere ikpeazụ: Nov. 27 2020 | 3 min agụ
Ị na-eche na-eme ihere n'ihu ndị inyom na-ada na-adọta ha?
Ị na-ata ahụhụ si n'okpuru obi ike n'ihu ha?
E nwere ozi ọma n'ihi na ị. Ị na-abụghị nanị onye na-ele otu. Dị ka a ma ama a na-ekwukarị
“Women dị ka ọtụtụ ụzọ, ma ọ bụrụ na ị na-aghọta ha, ị na-aghọta na ụwa”.
My akụkọ na ndị inyom:
M mgbe nile na otu nke ndị lanky na-achọghị na ụmụ okorobịa niile, tinyere m ụlọ akwụkwọ dị elu afọ. Amaghị m ihe na-ekwu ma ọ bụ na-eme na-ama na ndị inyom.
The nanị ajụjụ na mgbe nile anọgidewokwa na-anyụ m bụ otú na-adọta ndị inyom? All ndị enyi gbara m gburugburu nwere girlfriends mgbe m nwere ike mgbe ụzọ mee ihe ịjụ a girl si.
Ná mmalite m ahụhụ si egwu jụrụ. Mgbe e mesịrị m hụrụ na ọtụtụ n'ime ụmụ agbọghọ m gburugburu na-na-arụ na ya mere m bụ nke nhọrọ.
Nke a nọgidere na-eme n'ihi na ezi oge ụfọdụ ruo m nwoke nke okenye nyere m a ole na ole Atụmatụ. M soro ha na ntabi nweela maara aha n'etiti ụmụ agbọghọ.
Taa, M nwere a nwunye na-dere iche iche ụmụ nwanyị. My ahụmahụ na ndị inyom na-ejizi mewo ka m otu ọkachamara na nkà nke na-adọta ndị inyom. Ụfọdụ n'ime ndị a Atụmatụ nke pụkwara inyere gị aka na nke a bụ ndị a.
1. Nwee obi ike:
N'inwe obi ike na-n'ụzọ dị ukwuu ama ma jiri ya kpọrọ ndị inyom. Unu kwesịrị ije ije gara aga nwaanyị ọ bụla na a obi ike àgwà.
A pessimistic mkparịta ụka na-egosi na ị na-arịa ala mgbagwoju bụ nnukwu Gbanyụọ n'ihi na ndị inyom.
Women ka ndị ha nwere ike ịdabere na. N'ihi ya, agbalị mgbe nile na-ahụ na ndị inyom ga-esi mara na unu bụ ndị dị ike ma ịdabere. A bit nke onwe otuto nwekwara ike inye aka na-adọta ndị inyom.
2. Ịja ndị inyom:
Women nnọọ n'anya Ekele. Ọ bụ eleghị anya ndị kasị mma na ọtụtụ gbalịrị usoro iji na-adọta ndị inyom.
Ị nwere ike ịja ya na otú o anya, na otú o na-ejegharị, okwu, Uwe ma ọ bụ ịmụmụ ọnụ ọchị. Ọwọrọ, ihe ọ bụla ị ịja ya banyere ga-eme ka ya obi ụtọ.
A otutu inyom nnọọ n'anya Ekele banyere ya mma ime. Ya mere ị pụrụ agbalị nnọọ complimenting inyom ha na-adụ na-ahụ n'anya ọdịdị, n'anya obi na ndị dị otú ahụ ihe ndị ọzọ na-esi na ha n'otu ntabi anya.
3. Bụrụ onye na-ege ntị:
Otu isi ihe dị iche n'etiti ndị ikom na ndị inyom bụ, Mgbe ndị mmadụ na-agwa gị banyere nsogbu, ha na-atụ anya na ị gbagote na a ga-ekwe omume ngwọta.
Otú ọ dị, mgbe ụmụ nwanyị-agwa gị banyere nsogbu, ha dị nnọọ chọrọ ka ị na-ege ntị nsogbu na sulk ya na ya.
Women nwere obere ma ọ bụ na-enweghị mmasị banyere ihe ngwọta nke nsogbu. N'ihi ya, i nwere ike na-adọta ha ukwuu site nnọọ ịbụ a ege ntị nke ọma na agbazinye gị ntị ka ihe niile ha nwere ikwu. Nke a ga-eme ka ha na-eche na ị hụrụ n'anya ma na-eche banyere ha.
4. Nye ha onyinye:
Onyinye-eme ka ndị inyom kasị enye obi ụtọ. Otu n'ime ndị kasị mkpa azịza ajụjụ otú na-adọta ndị inyom bụ inye ha onyinye ọ bụla o kwere omume oge. Dị ka ndị inyom, otu oge dị mfe dị ka mbụ aka kwesịrị ka a na-eme ememe.
Ya mere, ị na-gwara na-a edetu na-echetara gị nke ụbọchị maka nta nke ihe. Nye ndị inyom onyinye usọrọ izu ma ọ bụ kwa ọnwa anniversaries nke ihe omume ndị na-adọta ha n'otu ntabi.
5. Nwee chivalrous:
Chivalry n'ụzọ dị ukwuu kpọrọ ndị inyom nile. Jide n'aka na ị ghara ichefu na obere nkọwa nke chivalry dị ka mmalite ụgbọala ya ụzọ ma ọ bụ na-eche ruo ọ anọdụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ na-adọta ya. Mgbe na-eti mkpu na ya ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ nwaanyị na ya ọnụnọ. Nke a ga-enyere gị aka nwere nnọọ ike echiche na nwaanyị na ị chọrọ woo.
Otu mmechi echiche na otú na-adọta ụmụ nwanyị bụ na-egosi ha gị obi n'akụkụ. Women Ekwughị ike ma emotionless bụ ndị a akụkọ ifo.
Nwaanyị ọ bụla na-enwe mmasị ka mmadụ na-eti mkpu ya n'ubu. Ya mere, mgbe ọ bụla o kwere omume, egosi ya gị obi n'akụkụ.
Were ya ka ihunanya fim, kandụl ìhè dinners. M gbalịrị ndị a niile na nweela ọtụtụ ụbọchị niile ezie na ndụ m.
Otú ọ dị, ụzọ ndị wooing na-adọta ndị inyom si dị iche na otu nwaanyị ọzọ. Kwesịrị Ekwesị nkọwapụta ga-enyere m na-eduzi gị mma na nke a mere na-eche na ịjụ ajụjụ ndị ọzọ.
Iji ahụ, Best chioma!
Ise Atụmatụ na otú Bịakwute A kpuru ìsì Ụbọchị
Olee otú mbara ala nwere ike ikwu gị Ịhụnanya gị Akara Aka
Katz na Nkịta : A bụrụ ndị Guide to Ọzụzụ na Living na Nkịta
Na-agba ọsọ na Nkịta: Ikwe gị Pup Duru gị Soulmate
Ndi na Don'ts Na-mbụ dịwara Introduction